Yakakwira mhando Yakazara Threaded Tsvimbo Mugadziri uye Mutengesi | Yanzhao
Tambo dzakazara dzakasungirirwa dzakajairika, zvinonamatira zviripo izvo zvinoshandiswa mukushandisa kwakawanda kwekuvaka. Matanda anoenderera mberi achimisikidzwa kubva kune mumwe mugumo kuenda kune mumwe uye anowanzo kunzi tsvimbo dzakazara, redi tsvimbo, TFL tsvimbo (Thread Yakazara Kureba), ATR (Yese tsvimbo tsvimbo) uye mamwe mazita akasiyana uye mazita. Matanda anowanzo kuvezwa uye anotengeswa mu3′, 6’, 10’ uye gumi nemaviri’ marefu, kana iwo anogona kutemwa kune yakatarwa kureba. Yese tambo tsvimbo inodimburwa kuita ipfupi kureba inowanzo kunzi zviputi kana zvakazara zvakamisikidzwa zviwiti.yakazara yakamisikidzwa mhete haina musoro, yakasungirirwa pamwe chete nehurefu hwayo hwese, uye iine yakasimba tensile simba. Aya ma Stud anowanzo sungwa neese maviri nzungu uye anoshandiswa nezvinhu zvinofanirwa kuunganidzwa uye kusunganidzwa nekukasira.Kuita sepini iyo inoshandiswa kubatanidza zvinhu zviviri Matambo akasungirirwa anoshandiswa kusunga huni kana simbi.Tambo dzakazara dzakapetwa dzinouya mune anti-ngura Stainless simbi, chiwanikwa simbi uye kabhoni simbi zvinhu izvo zvinovimbisa kuti chimiro hachina’t inopera simba nekuda kwengura.
Yakazara shinda tsvimbo dzinoshandiswa mune akawanda akasiyana ekuvaka kunyorera. Iwo matanda anogona kuiswa mune dziripo kongiri slabs uye anoshandiswa se epoxy anchor. Mafupi mapfupi anogona kushandiswa akabatanidzwa kune imwe yekutsanya kuwedzera kureba kwayo. Yese tambo inogona zvakare kushandiswa senzira dzinokurumidza kune anchor tsvimbo, inoshandiswa pombi flange kubatanidza, uye inoshandiswa seakaviri mabhii ekudhira mu pole mutsara indasitiri. Kune zvakawanda zvimwe zvekushandisa zvekushandisa zvisina kutaurwa pano umo tambo dzese dzeshinda kana zvizere zvakamisikidzwa zviwiti zvinoshandiswa.
Nhema-oxide simbi screws iri zvinyoro ngura inodzivirira munzvimbo dzakaoma. Zinc-yakafukidzwa simbi screws inodzivirira ngura munzvimbo dzakatota. Nhema ye-ultra-corrosion-resistant-coated steel screws inopesana nemakemikari uye inomira maawa chiuru emunyu spray.Coarse tambo ndiwo indasitiri standard; sarudza aya masikuru kana iwe usingazive shinda pa inch. Shinda dzakatsetseka uye dzakawedzera-dzakapatsanurwa dzakanyatsopatsanurwa kudzivirira kusununguka kubva kudengenyeka; Grade 2 mabhaudhi anowanzo shandiswa pakuvaka kwekujoinha huni zvinhu. Giredhi 4.8 mabhaudhi anoshandiswa mune zvidiki injini. Grade 8.8 10.9 kana 12.9 mabhaudhi anopa yakakwirira tensile simba. Imwe yekubatsira mabhaudhi anosunga ane pamusoro pemasimbi kana mariveti ndeyekuti iwo anotendera nyore nyore disassembly yekugadzirisa uye kugadzirisa.
P Mazino akaomesesa 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
Mazino akanaka / / / / / / / 1 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Mazino akanaka / / / / / / / / 1 1.25 / / /
uremu(Simbi)≈kg 18.7 30 44 60 78 124 177 319 500 725 970 1330 1650
P Mazino akaomesesa 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
Mazino akanaka 1.5 1.5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Mazino akanaka / / / / / / / / / / / /
uremu(Simbi)≈kg 2080 2540 3000 3850 4750 5900 6900 8200 9400 11000 12400 14700
Pashure: Kaviri End End Stud Bolts
Zvadaro: Flat Washers
Yakakwira Simba Hex Bolts, Din6921 Flange Nuts, Hexagon Socket Musoro Bolts, Nhema Oxidation Hex Bolts, Dema Kuputira Hex Bolts, Bolts,